Guskaygu waa mid aad u yar.
cabirka guska iyo iswaafajinta: waxaad ubaahantahay inaad ogaato
Sidee looga helaa jinsiga qofka leh gus yar?
Guskaygu waa mid aad u yar. Haa haa? Ha hubin sidaas. Tani waa maqaal ku saabsan qaar ka mid ah cilmi baarista ee qiyaasta guska. Hadda, daraasad cusub ayaa laga yaabaa in lagu ogaado walwalka noocaas oo ah waxa ugu muhiimsan ee lagu cabbiro qiyaasta saxda ah ee guska ilaa taariikhda.
Daraasado badan oo hore waxay ku tiirsan yihiin is-sheegid, taas oo had iyo jeer aan keenin natiijooyin lagu kalsoon yahay. David Veale, oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada maskaxda ee South London iyo Maudsley NHS Foundation Trust ayaa yiri: Markaa markii Veale iyo kooxdiisu u dhaqaaqeen inay dhibcaha ku xalliyaan saamiga qalinka, waxay go'aansadeen inay xog ka soo ururiyaan rugaha caafimaadka ee raacay nidaamka cabbiraadda ee caadiga ah.
Xogta waxay u suurta galisay cilmi baarayaashu inay xisaabiyaan celcelis ahaan oo ay qaabeeyaan qiyaasta qeybinta cabirka galmada ee aadanaha.
Marka loo eego falanqaynta kooxda, celceliska jilicsanaanta, guska qalalaasuhu waa 9. Cabbiraadaha girth ee u dhigma waa 9. Jaantus ka mid ah qaybinta cabbirka ayaa muujinaya in bannaanka ay dhif yihiin. Taa bedelkeeda, guska kacsan ee culeyskiisu yahay 10 cm 3. Mudanayaal, haddii aad u jeceshahay inaad aragto sida aad u qiyaaseyso, waxaad u baahan doontaa inaad raacdo isla nidaamka cabbiraadda ee loo adeegsaday daraasadda.
Dhammaan cabbiraadaha dhererka waxaa laga sameeyay lafta xubinta taranka ilaa cirifka ciridka dhinaca sare ee guska. Dufan kasta oo daboosha lafaha xubinta taranka ayaa la cadaadiyey cabirka ka hor, iyo dherer kasta oo dheeri ah oo ay bixiso buuryadu lama tirin.
Wareegtada waxaa lagu cabiray salka guska ama hareeraha usheeda dhexe, maadaama labada gooboodba loo arkay inay u dhigmaan. Cilmi baarayaashu waxay ku soo gabagaboobeen in aysan jirin caddayn xoogan oo lagu xiriirinayo xajmiga guska si ay u muujiyaan muuqaalada kale sida dhererka, index mass-ka, ama xataa xajmiga kabaha. Haa, waxay u muuqataa in gabagabada kaliya ee qarsoodiga ah ee xajin kara sirqaha weyn leh inuu yahay cufan weyn. Sidoo kale, daraasadaas ma aysan helin xiriir weyn oo ka dhexeeya xajmiga xubinta taranka iyo jinsiyada ama jinsiga, inkastoo Veale ay tilmaamayaan in daraasaddooda aan loo qorsheynin in ay baaritaan ku sameeyaan ururadaas, sababtoo ah inta badan xogta la isticmaalay waxay ka socotaa daraasadihii ragga Caucasian.
Qaarkood waxay raadiyaan xalal qalliin oo khatar badan u leh dhibaatada, sida uu qabo Veale, badiyaa madaxa uun bay ku jirtaa. Pornography, oo ah dadka riwaayadaha badanaa lagu soo doorto xubnahooda weyn ee xubinta taranka, ayaa laga yaabaa inay qayb ahaan u eedeeyaan. Sidoo kale, Herbenick waxay tilmaamaysaa farriimaha e-mailka ah ee tira badan oo sheegaya in Waxaa wanaagsan in aad iska indha tirto xayeysiisyada kiis kasta, ayuu yiri Veale.
Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay cilmibaarista, cabbirku ma laha waxqabasho: Saameyn xad-dhaaf ah oo qadarin ah ayaa saameyn ku leh shaqaynta ragga ee caafimaadka qaba? Waa tan waxa xubin xubin ka ah uu ka qoray xubintiisa: Marwalba waan iska kalsoonahay guska. Marka hore - sidaan ku idhi qoraal hore - waa lay guday oo markaan yaraa tan marwalba way i dhibaysaa. Waddankeenna wiilal badan ayaan la gudin - sidaas darteed runti maahan wax iska caadi ah. Waxaan dareemayaa kala duwanaansho - sida ugu dhow waxaan ahay nooc ka mid ah cilaaqaadka.
Marka labaad - Waxaan lahaa walaac badan oo ku saabsan cabirka guska. Aad ayey u badan tahay dhowr sano ka hor aniga oo ku dhex jira qaybtayda ugu adag ee balwadeyda Waxaan bilaabay inaan sameeyo baaritaanno badan oo ku saabsan cabirka Guska… waa maxay celceliska, maxay dumarku jecel yihiin, sidee si dabiici ah u kordhisaa cabirka guska, kiniiniyada suuqa yaala iwm iwm iwm.
Xitaa waxaan hal marxalad isku dayay inaan sameeyo xoogaa jimicsi ah oo sida muuqata dabiici ahaan u kordhin doona cabirka guska Waxaa lagu magacaabaa Jelqing Sikastaba, runtii runti kamaan helin wax guul ah oo weyn oo aan ku ogaan karo - runtiina runtii iskuma aanan dadaalin… Guud ahaan waxaan dareemay wax yar oo qosol badan - iyo in haweenna aysan waligey i rabin.
Hada xaqiiqooyin kale oo xiiso leh. Markaan guska saacadkeyga kaco 16cm - taas oo ah 6. Taas oo micnaheedu yahay pornstar weyn. Laakiin waxa aan xaqiiqsaday ka dib 2 sano oo guur ah iyo 30 maalmood oo dib u soo kabasho ah - ayaa ah in filimka weyn ee nolosha dhabta ahi uusan ugu dhawaanaynin dumarka sida aan u maleyno inay tahay.
Marka hab yaab leh - gebi ahaanba ka soo horjeedka wixii aan aaminsanahay inta badan noloshayda - haddii aan dhab ahaan lahaan lahaa dhudhun dhudhun yar - waxay dhab ahaan ii oggolaan doontaa inaan si aad ah u riixo si aan dib u dhigin ama aan ka walwalin dhaawicinta iyada. Ha iga qaldamin - anigu damac kama lihi guska yar - laakiin waxaan dhihi karaa Haddii aan dhihi lahaa 10 inch oo ah 'pornstar dick' - xaaskeyga oo lala seexdo waxay noqon laheyd riyo qaali ah!! Runta kale ayaa ah in dumarka badankood ay leeyihiin kanaal siilka ah oo u dhexeeya inta udhaxeysa 3 - 7 inji badankooduna waxay kujiraan dhamaadka qoto dheer ee miisaanka … marka hadaad leedahay 10 inch dick… asal ahaan ma awoodi doontid inaad si buuxda ugu dhex gasho naagta adigoon wax dhib ah u keenin.
Waxaas oo dhan ayaa la dhahay - mar kale ayaan u imid inaan ogaado sida lebenku u foorarsaday habkeyga fekerka - runtiina waxaan jeclaan lahaa inaan dib ugu noqdo waqtigeyga - oo aanan waqti badan ku qaadan walwalka, baaritaanka, isku dayga jimicsiyo aan kala sooc lahayn iwm iwm Kalsoonidayda naftayda ayaa runti wasakhaysay sababtoo ah indha indhaynta guska weyn ee 'pornstar penis' sida ilaa 15 sano sidee u ahayn!
Si tartiib tartiib ah laakiin dhab ahaan guurkeyga iyo xaqiiqda ah in xaaskeygu ay u maleyneyso in guskaygu aad u weyn yahay Hahaha iyo dib u soo kabashada waxaan maareeyaa inaan si tartiib tartiib ah kalsooni ugu helo mar labaad oo aanan u dareemin dabiici aan dabiici ahayn.
Porn wuxuu runtii xadayaa ninnimadeena - wuxuuna na siinayaa dareen been ah oo ah waxa nin ahaaneed oo dhan. Waan ogahay inay ka fududdahay sida la dhaho - laakiin waa mudan tahay in loo daayo go.
Markii aan yaraa waxay igu dhibtay heer aan rabin inaan aado iskuulka maalmaha jimicsiga. Hadda waxaan la sameeyaa isboorti asxaabta iyo qubeyska kadib, oo gebi ahaanba waan aqbalaa. Qaab fekerkeygu wuxuu ka soo baxay "waxay ku qosli doonaan dickkeyga yar" ilaa "cabirka xubinta taranka caqabad kuma noqon karo nolol wanaagsan" inuu kufto, waxaan uqaadan karaa dhamaan walaalahay yar ee xun.
Tallaabo dheer oo ka baxsan dhibbanaha! Ma fiirin jacaylka jilicsan ee jacaylka leh khiyaamo weyn, waxaan rumaysanahay, waxay faa'iido u tahay aqbalaadda jirkeena. Xitaa dan kama lihi nin. Looma baahna waxyaabahan isbarbardhiga doqonimada ah ee aan sameyn jiray. Waxaan ku dhejin karaa xiriiriyeyaasha dhammaan sahannada la sameeyay ee ku saabsan celceliska cabbirka iyo waxaas oo dhan, laakiin fursadaha ayaa ah haddii aad halkan joogto, horay ayaad taas u sameysay.
PMO la'aanteed, ma dareemi doontid baahida dambe maxaa yeelay waxaad bilaabi doontaa inaad naftaada u jeclaato cidda aad tahay guji, laakiin run ahaan. Raadinta Saameynta dhaqameedyada dhaqanka ee ragga ragga Waxyaaba xajmiga fikradaha iyo go'aamada lagu garto hoos udhaca galmada: Daraasad tayo leh Aesthet Surg J.
Si kastaba ha ahaatee, wax yar ayaa loo yaqaanaa arrimaha ku saabsan arrimaha bulshada iyo dhaqanka ee saameeya ragga si ay u tixgeliyaan hababkaas. Ujeeddooyinka: In la baaro astaamaha dhaqan-bulsheed ee saameynaya aragtida ragga ee ku aaddan cabirkooda guska iyo sidoo kale go'aannada ay ka qaataan kordhinta galmada.
Natiijooyinka: Saddex mawduuc oo ugu muhiimsan wareysiyada, oo ah "saameynta filimada", "la barbardhigta asxaabta" iyo "fekerka muuqaalka aan tooska ahayn". Raggu waxay xuseen in jinsiyadaha waaweyn ee jinsiga ah ee filimmada ah ay ku dhufteen dareenkooda cufanka caadiga ah ee guska.
Tarjumaadyo badan ayaa la heli karaa.
Caafimaadka Cabirka iyo qaabka guska ayaa ah mid ay dad badan walaac ka muujiyaan, gaar ahaan marka ay timaado is waafaqsanaanta galmada. Si kastaba ha noqotee, ma jiro hal cabir oo dhan, oo waxaa jira arrimo iswaafajin muhiim ah oo aan ahayn cabbirka guska.
Lamaanayaal badan oo galmo ah, iswaafajinta galmada waa qodob muhiim ah. Si kastaba ha noqotee, daraasadaha waxay soo jeedinayaan in cabirka xubinta taranka uusan aheyn qodobka ugu muhiimsan ee qanacsanaanta galmada. Lammaanaha galmada galmada dabada, dhererkoodu sidoo kale waxay noqon karaan caqabad. Dadku waa inay ka wada hadlaan baahidooda galmada, iyagoo si furan ugula xiriiraya sida loo daboolayo baahiyahaas, iyadoon loo eegin cabirka ama qaabka uu leeyahay lamaanaha midkood.
Qormadan waxaan kaga hadlaynaa cabirka guskaiyo waafaqsanaanta xubnaha taranka. Waxaan sidoo kale bixinaa talooyin ku saabsan sida loo wanaajiyo iswaafajinta. Share on Pinterest Cabirka guska dhif ayaa ah qodobka ugu muhiimsan ee la jaanqaadka galmada. A A Daraasad laga sameeyay oo ka kooban 80 nin ayaa lagu ogaaday in celceliska guska jilicsan uu yahay 8.
Iyadoo taas laga duulayo, ayay qorayaasha daraasaddu soo gabagabeeyeen in qalliinka lagu ballaadhinayo xubinta taranka ay tahay inuu ikhtiyaar u ahaado ragga dhererkoodu kacsiga ka yar yahay 7. Falanqeyntan ayaa shaaca ka qaaday a lCelcelis ahaan dhererka guska jilicsan ee 9. Daraasad oo ka kooban 1, rag, cilmi baarayaashu waxay soo gabagabeeyeen in celceliska dhererka guska uu yahay In kasta oo daraasaddani ay ku tiirsanayd celceliska ka-qaybgalayaasha, haddana cilmi-baarayaashu waxay dareemeen in natiijooyinka ay si aad ah ula jaan qaadayaan natiijooyinka cilmi-baaristii hore.
Daraasaddan, ragga waxay soo sheegeen celcelis ahaan dhererka guska oo ah 6. Daraasadda, ku dhowaad saddex meelood meel ka mid ah kaqeybgalayaashu waxay soo sheegeen inay leeyihiin cabir xubinta taranka oo ah 7 inji Seuls Isla falanqaynta ayaa heshay xiriir ka dhexeeya ku qanacsanaanta cabirka guska iyo qanacsanaanta guud ee muuqaalka. Cabirka ayaa ku jira isha qofka wax arka. Dookha dadku u leeyihiin cabirka xubinta taranka waxay ku kala duwan yihiin baahidooda galmada, nooca galmada ay leeyihiin, caadooyinka dhaqanka, iyo arrimo kale oo badan.
Cilmi baaris waxay soo jeedineysaa in dhererku uusan aheyn qodobka galmada ugu muhiimsan dadka badankood. Daraasad Raaxada galmada: Haddii guska uu aad ugu weynaado lammaanaha, gusku wuxuu noqon karaa xanuun leh, gaar ahaan iyada oo aan lahayn saliid ku filan.
Haddii ay jiraan kala duwanaansho mug leh, galmada dabada waxay noqon kartaa mid aad u xanuun badan ama xitaa aan macquul aheyn. Raaxada galmada: Dhererka iyo guntinta xubinta taranka qofka waxay saameyn ku yeelan kartaa awooddooda si ay u kiciyaan lamaanahooda Tusaale ahaan, qofka leh gus gaaban laakiin ballaadhan ayaa laga yaabaa inuu awood u yeesho inuu kicin xoog leh u sameeyo aagga gudaha dabada ama siilka lammaanaha, laakiin aan awoodin inuu gaaro aagagga qoto dheer.
Walaaca galmada iyo fikradaha: Dhererka dhabta ah ma ahan lQodobka kaliya ee muhiimka ah. Lamaane kastaa sida uu u arko cabirka ama cabirka yar ee guska wuxuu saameyn ku yeelan karaa raaxadooda waayo aragnimada.
Tusaale ahaan, qofku wuxuu dareemi karaa walaac ku saabsan guska yar ee la dareemayo in kastoo guskiisu dhexdhexaad yahay cabirkiisa. Iswaafajinta xubinta taranka Vaginas, sida guska, way kala duwan yihiin cabir ahaan iyo qaab ahaanba. Sababtaas awgeed, dadka siilka ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ka walwalaan waxa dadka kale u arkaan caadiga. Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanshaha u dhexeeya siilka way adagtahay in la cabiro maxaa yeelay siilka waa muruq gudaha ah oo qaabkiisa isbedelaya oo ku saabsan halka uu qofku ku jiro wareegga caadada, inuu uur leeyahay iyo arrimo kale.
Dadka qaarkiis waxay leeyihiin xubinta taranka haweenka oo ka cidhiidhsan kuwa kale. Siilka qofka sidoo kale wuxuu noqon karaa mid gacmeed, oo afka ilmagaleenka oo u dhow iridda, taasoo u oggolaaneysa gelitaanka hoose In kastoo tani ay si fiican u shaqeyn kartoQofka guska gaaban, oo leh gus dheer, wuxuu ka dhigi karaa gelitaan buuxa dhib ama xanuun.
Halkan guji si aad waxbadan uga ogaato qoto dheerida xubinta taranka. Waa quraafaad in xubinta taranka haweenka ay kujiraan da 'ama galmo joogta ah.
Muruqyada laastikada ee xubinta taranka haweenka waxay awoodaan inay is kala bixiyaan oo ay ku noqdaan qaabkoodii caadiga ahaa. Si kastaba ha noqotee, dhaawaca muruqyada miskaha ayaa saameyn ku yeelan kara dareenka galmada. Halkan guji si aad waxbadan uga barato kudhaca xubinta taranka. Daaweynta jimicsiga jirka iyo laylinta sagxada miskaha, sida jimicsiyada Kegel, waxay ka caawin kartaa qofka inuu dib u tababbarto sagxada miskaha oo uu ka adkaado arrimaha taageerada miskahakaalay.
Si kastaba ha noqotee, jimicsiyadan ayaan ka adkaan doonin is-waafajinta anatomical muhiim ah. Halkan guji si aad waxbadan uga ogaato ciriirida xubinta taranka. Futada, sida siilka, waa muruq. In kasta oo uusan inta badan si weyn u kala bixin , waayo-aragnimadii hore ee galmada dabada waxay u fududeyn kartaa qofka inuu dabciyo muruqyadiisa si uu u galo Dadka yar yar waxay yeelan karaan futada waxyar ka yar, taas oo ka dhigaysa gelitaanka mid aad u adag haddii lamaanahooda uu leeyahay gus weyn.
In kasta oo iswaafaqlaado ay dhacaan, cabirka guska ayaa dhif ah qodobka ugu muhiimsan raaxada galmada. Soo koobid Dadka badankood, cabirka kama hor istaageyso galmada raaxada leh, xitaa haddii ay is fahmi waayaan. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo dadku isugu kicin karaan si ay u bixiyaan qanacsanaanta galmada. Dhakhtarku wuxuu ka wada hadli karaa istiraatiijiyadaha maaraynta dhibaatooyinka caafimaadka galmada oo xitaa wuxuu soo jeedin karaa daaweyn marka cabirka ama qaabka xubinta taranka ay si dhab ah u waxyeeleyso qanacsanaanta galmada.
Walaaca galmada iyo fikradaha: Dhererka dhabta ah ma ahan lQodobka kaliya ee muhiimka ah. Lamaane kastaa sida uu u arko cabirka ama cabirka yar ee guska wuxuu saameyn ku yeelan karaa raaxadooda waayo aragnimada. Tusaale ahaan, qofku wuxuu dareemi karaa walaac ku saabsan guska yar ee la dareemayo in kastoo guskiisu dhexdhexaad yahay cabirkiisa. Iswaafajinta xubinta taranka Vaginas, sida guska, way kala duwan yihiin cabir ahaan iyo qaab ahaanba. Sababtaas awgeed, dadka siilka ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ka walwalaan waxa dadka kale u arkaan caadiga.
Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanshaha u dhexeeya siilka way adagtahay in la cabiro maxaa yeelay siilka waa muruq gudaha ah oo qaabkiisa isbedelaya oo ku saabsan halka uu qofku ku jiro wareegga caadada, inuu uur leeyahay iyo arrimo kale.
Halkan guji si aad waxbadan uga ogaato qoto dheerida xubinta taranka. Waa quraafaad in xubinta taranka haweenka ay kujiraan da 'ama galmo joogta ah. Muruqyada laastikada ee xubinta taranka haweenka waxay awoodaan inay is kala bixiyaan oo ay ku noqdaan qaabkoodii caadiga ahaa. Si kastaba ha noqotee, dhaawaca muruqyada miskaha ayaa saameyn ku yeelan kara dareenka galmada. Halkan guji si aad waxbadan uga barato kudhaca xubinta taranka. Haa, waxay u muuqataa in gabagabada kaliya ee qarsoodiga ah ee xajin kara sirqaha weyn leh inuu yahay cufan weyn.
Sidoo kale, daraasadaas ma aysan helin xiriir weyn oo ka dhexeeya xajmiga xubinta taranka iyo jinsiyada ama jinsiga, inkastoo Veale ay tilmaamayaan in daraasaddooda aan loo qorsheynin in ay baaritaan ku sameeyaan ururadaas, sababtoo ah inta badan xogta la isticmaalay waxay ka socotaa daraasadihii ragga Caucasian. Qaarkood waxay raadiyaan xalal qalliin oo khatar badan u leh dhibaatada, sida uu qabo Veale, badiyaa madaxa uun bay ku jirtaa. Pornography, oo ah dadka riwaayadaha badanaa lagu soo doorto xubnahooda weyn ee xubinta taranka, ayaa laga yaabaa inay qayb ahaan u eedeeyaan.
Sidoo kale, Herbenick waxay tilmaamaysaa farriimaha e-mailka ah ee tira badan oo sheegaya in Waxaa wanaagsan in aad iska indha tirto xayeysiisyada kiis kasta, ayuu yiri Veale. Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay cilmibaarista, cabbirku ma laha waxqabasho: Saameyn xad-dhaaf ah oo qadarin ah ayaa saameyn ku leh shaqaynta ragga ee caafimaadka qaba?
Waa tan waxa xubin xubin ka ah uu ka qoray xubintiisa: Marwalba waan iska kalsoonahay guska. Marka hore - sidaan ku idhi qoraal hore - waa lay guday oo markaan yaraa tan marwalba way i dhibaysaa. Waddankeenna wiilal badan ayaan la gudin - sidaas darteed runti maahan wax iska caadi ah. Waxaan dareemayaa kala duwanaansho - sida ugu dhow waxaan ahay nooc ka mid ah cilaaqaadka. Marka labaad - Waxaan lahaa walaac badan oo ku saabsan cabirka guska. Aad ayey u badan tahay dhowr sano ka hor aniga oo ku dhex jira qaybtayda ugu adag ee balwadeyda Waxaan bilaabay inaan sameeyo baaritaanno badan oo ku saabsan cabirka Guska… waa maxay celceliska, maxay dumarku jecel yihiin, sidee si dabiici ah u kordhisaa cabirka guska, kiniiniyada suuqa yaala iwm iwm iwm.
Xitaa waxaan hal marxalad isku dayay inaan sameeyo xoogaa jimicsi ah oo sida muuqata dabiici ahaan u kordhin doona cabirka guska Waxaa lagu magacaabaa Jelqing Sikastaba, runtii runti kamaan helin wax guul ah oo weyn oo aan ku ogaan karo - runtiina runtii iskuma aanan dadaalin… Guud ahaan waxaan dareemay wax yar oo qosol badan - iyo in haweenna aysan waligey i rabin. Hada xaqiiqooyin kale oo xiiso leh. Markaan guska saacadkeyga kaco 16cm - taas oo ah 6.
Taas oo micnaheedu yahay pornstar weyn. Laakiin waxa aan xaqiiqsaday ka dib 2 sano oo guur ah iyo 30 maalmood oo dib u soo kabasho ah - ayaa ah in filimka weyn ee nolosha dhabta ahi uusan ugu dhawaanaynin dumarka sida aan u maleyno inay tahay.
Marka hab yaab leh - gebi ahaanba ka soo horjeedka wixii aan aaminsanahay inta badan noloshayda - haddii aan dhab ahaan lahaan lahaa dhudhun dhudhun yar - waxay dhab ahaan ii oggolaan doontaa inaan si aad ah u riixo si aan dib u dhigin ama aan ka walwalin dhaawicinta iyada.
Ku raaxayso jinsiga kula mulkiilaha guska yar Marka ugu horeysa, si aad ugu raaxeysatid galmo qof qaba jinsi yar, waxaad u baahan tahay inaad ka gudubto niyadjabkaaga iyo inaadan is barbardhigin jacaylkiisa iyo qalabka kale ee jacaylka, kuwaas oo aad u weyn.
Xasuuso in sharafta qofka weyni uu weli yahay damaanad-qaadka jinsiga. Caddeymaha Tani waxay u adeegi karaan xaqiijinta Cilmi-baarista Caanka Maraykanka ee caanka ah iyo qoraaga wax faa'iido badan oo jinsi ah, Joy Davidson, oo aaminsan in marka xubin yar yar uu galo gabalada dumarka ah, wuxuu isla markiiba ku dulsaaraa meeshii loogu yeero G, markaa isla markaa xubin weyn oo badanaa " iyada soo dhaafay.
Waxaa intaa dheer, ragga oo leh gus yar ayaa ah erayga "cunnilingus", sidoo kale waxay leeyihiin xirfado farsamo oo kala duwan. Si buuxda loo ogaado haweenka dabiiciga ah ee haweenka, ma aha oo kaliya miisaaniyadda sharafta ragga waa mid muhiim ah, laakiin sidoo kale awooda nin inuu xakameynayo jahawareerkiisa bilowga ilaa dhamaadka, si uu uga caawiyo rafiiqa inuu ku raaxeysto raaxo aan caadi ahayn.
Sababtaas awgeed waa sababta keentay in orgaanku dumarku gaaro iyadoo aan loo eegin xajmiga manka. Tani waa xaqiiqo! Gus-yar yar: waxa ugu fiican Dhakhtarka Jinsiga ee Maraykanka iyo lataliyaha qoyska ee la yiraahdo Boni Aiker Wilde, wuxuu kula taliyaa: "Haddii lammaanahaaga uu qabo gus yar, isku day inaad galmo la yeelatid isaga oo u ogolaanaya inaad ugu yaraan guska gashato. Meelahaas oo kale waxaa suurtagal ah in la qaado boos "ninkii ka dambeeyey". Sidoo kale, haddii ay dhacdo, waxay si fiican u haboonaan doontaa oo ay u gudbi doontaa qanacsanaanta ugu weyn ee labada lamaane, marka haween ah inta lagu jiro sameynta jacaylku waxay ku laaban doontaa dhabarkeeda, taas oo yaraynaysa muruqyada caanka ah.
Waxaad sidoo kale isku dayi kartaa lammaane sidan oo kale ah marka nin, jilbaha jilbaha, dhinaciisa ku jiifa, iyo naagta, iyada oo dhinaceeda. Waqtigan xaadirka ah, lammaanuhu waa inuu leexsho inta ugu badan ee suurtagal ah, taas oo hubinaysa in si qoto dheer loo geliyo siilka guska. Ha iloobin hawsha adeegayaasha ah ee nala wadaagaya oo dhan, kaliya kiiskan waa in haweenku u baahan tahay inay si adag u xirto bowdeeda iyada oo bowdaheeda.
Posted in Guska yar
thoughts on “Guska yar”
25.09.2021 at 22:01